Banijya News | युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको आइपीओ विक्री खुलाः कस्तो छ वित्तीय अवस्था, कति भर्ने ? - Banijya News युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको आइपीओ विक्री खुलाः कस्तो छ वित्तीय अवस्था, कति भर्ने ? - Banijya News
युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको आइपीओ विक्री खुलाः कस्तो छ वित्तीय अवस्था, कति भर्ने ?
२४ असार २०७८
काठमाडौं – युनियन लाइफ इन्सुरेन्सले बिहीबारदेखि आइपीओ बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको दरमा ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आइपीओ जारी गरेको हो । ५८ लाख ५ हजार कित्ताको लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् । जसमध्ये ३ लाख २२ हजार ५ सय कित्ता कर्मचारी र ३ लाख २२ हजार ५ सय कित्ता म्युचुअल फन्डको लागि छुट्याइएको छ । न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ३२ हजार २५० कित्ताको लागि आवेदन दिन सकिनेछ । यस आइपीओमा छिटोमा असार २८ गतेदेखि ढिलोमा साउन ७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ ।
सी–आस्वाको माध्यमबाट आवेदन दिन सकिन्छ । यो आइपीओमा प्रभु क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक रहेको छ । यो कम्पनीको वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको छ । त्यही भएर यस आइपीओलाई इक्रा नेपालले आइआर बीबीबी रेटिङ दिएको छ । इक्राले सन् २०२१ मे १७ मा उक्त रेटिङ दिएको हो । यो रेटिङ सन् २०२२ मे १६ सम्म बाहल रहनेछ ।
विसं २०७४ असोज ४ गतेदेखि बिमा व्यवसाय गर्दै आएको युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको अधिकृत पुँजी २ अर्ब १५ कारोड रुपैयाँ र जारी पुँजी पनि २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ नै रहेको छ । जारी पुँजीमध्ये १ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ संस्थापक सेयरधनीबाट चुक्ता भइसकेको छ । त्यस्तै ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आइपीओ जारी गर्न लागिएको हो । आइपीओपछि चुक्ता पुँजी जारी पुँजी बराबर अर्थात २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
पछिल्लो समय आइपीओमा आवेदन दिने लगानीकर्ताको संख्या अत्याधिक मात्रामा छ । बुधबार बाँडफाँट भएको जीवन विकास लघुवित्त, मनकामना स्मार्ट लघुवित्तमा २० लाख माथिका लगानी कर्ताले आवेदन दिएका छन् । यसको आधारमा लगानी कर्ता यस्मा पनि होमिने सम्भावना छ । तर यस कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि ५८ लाख ५ हजार कित्ता निष्कासन खुला गरेको हो । यसआधारमा, न्यूनतम १० कित्ताका दरले बाँडफाँट गर्ने हो भने पनि जम्मा ५ लाख ८० हजार ५०० जना लगानीकर्ताले मात्र यो आइपीओ हात पार्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा युनियन लाइफको आइपीओमा पनि १० कित्ताका लागि आवेदन दिदा नै पर्याप्त हुने हुने सेयर विश्लेषक बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म युनियन लाइफले ८ करोड ९५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तै, आव २०७८–७९ मा १३ करोड ३९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ र आव २०७९–८० मा १८ करोड ८३ लाख २० हजार रुपैयाँ नाफा कमाउने अनुमान छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा प्रतिसेयर आम्दानी ६ रुपैयाँ २३ पैसा र आव २०७९–८० मा ८ रुपैयाँ ७६ पैसा पुग्ने अनुमान रहेको छ । साथै, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस इन्सुरेन्सको प्रतिसेयर नेटवर्थ १३६ रुपैयाँ ५२ पैसा र आव २०७८–७९ मा १४२ रुपैयाँ ७५ पैसा पुग्ने अनुमान रहेको छ ।
कारोबार गर्ने मुख्य स्थान काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं. १०, नयाँ बानेश्वर काठमाडांैमा रहेको युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत स्थापित भई बिमा ऐन, २०४९, बिमा नियमावली २०४९ बमोजिम बिमा व्यवसायको कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त संस्था हो । यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय सिद्घार्थनगर नगरपालिका वडा न. ८, रुपन्देहीमा रहेको छ । यस कम्पनीमा १३ जना आधारभूत सेयरधनीहरु रहेका छन् । यसमा अधिकांश माडवारी समुदायको बाहुल्यता रहेको छ ।
#आइपीओ #युनियन लाइफ इन्सुरेन्स
मैलुङ खोला जलविद्युतले आइपीओ जारी गर्न पायो अनुमति